Fikarohana momba ny firaisana Trangan-javatra momba ny Reikarnasionan'i Anne Frank Barbro Karlen - Avy amin'ny Famonoana Tambabe - Zava-misy Misy Ankizy Velona any An-tranony - Ny Fikambanana Ifanampiana
From: Ary ny Wolves Howled, nataon'i Barbro Karlen
Article from ateraka indray, by Walter Semkiw, MD
Ny iray amin'ireo tranga teraka tamin'ny laoniny lehibe tamin'ny kolontsaina dia i Barbro Karlen, izay nananako voninahitra tamin'ny fanaovana famelabelaran-kevitra niarahana tamin'ny taona 2001. Nihaona tamin'i Barbro voalohany aho tamin'ny taona 2000 ary izao dia heveriko ho namana tena tsara izy. Te hizara aminareo ny zavatra niainany aho. Amin'ny faran'ity lahatsoratra ity dia mety hojerena horonantsary iray izay itantaran'i Barbro ny tantarany amin'ny teniny manokana. Ampitomboy ny sary amin'ny fikitihana azy ireo.
Ny fiainam-pianakaviana taloha dia fahatsiarovana an'i Anne Frank
Anne Frank dia maty tao amin'ny toby fitanana Bergen-Belsen tamin'ny 1945. Tsy latsaky ny folo taona taty aoriana, tamin'ny 1954, dia teraka tamin'ny ray aman-dreny kristiana tany Suède i Barbro Karlen. Fony mbola latsaky ny telo taona i Barbro dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny fa tsy Barbro no anarany, fa "Anne Frank." Ny ray aman-drenin'i Barbro dia tsy nahalala hoe iza i Anne Frank, satria tsy fantany ilay boky, Anne Frank: Diarin'ny Zatovovavy, Fantatra ihany koa amin'ny Ny Diarin'i Anne Frank.
Notantarain'i Barbro fa tian'ny ray aman-dreniny hiantso azy ireo hoe "Ma sy Pa", saingy fantatr'i Barbro fa tsy tena ray aman-dreniny izy ireo. Nilaza tamin'ny reniny aza i Barbro fa ho avy tsy ho ela ny tena ray aman-dreniny haka azy ary hitondra azy any amin'ny tena tranony. Ireo fanambarana ireo dia mahazatra an'ny pahaizana momba ny harinkarena fahatsiarovan-jaza nandritra ny fikarohana nataon'i Ian Stevenson, MD, tao amin'ny Oniversiten'i Virginia.
Nandritra ny fahazazany, Barbro dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny ny antsipiriany momba ny fiainany toa an'i Anne, izay noheverin'ny ray aman-dreniny ho nofinofy. Ho fanampin'izany, Barbro dia nanonofy ratsy izay nandehanan'ny lehilahy nihazakazaka tamin'ny tohatra ary nandaka ny varavarana mankamin'ny trano fierenan'ny fianakaviany. Sarin'ny ivelan'ny trano fialofana an'ny fianakaviana Frank, izay misy ny tafo mena, omena etsy ambany sy ankavanana.
Barbro dia novalian'ny mpitsabo sivika
Toeram-pialofana miafina ao amin'ny Family of Frank
Ny fahatsiarovan'i Barbro ny fiainana taloha dia nampanahy ny ray aman-dreniny ary nisy fotoana, fony izy mbola zaza, dia nanombana azy ny mpitsabo aretin-tsaina. Barbro, na izany aza, dia nahalala tamin'ity indray mitoraka ity fa tsy fahendrena ny miresaka momba ny tontolo hafa nonenany, ny tontolon'i Anne Frank, satria hitany fa "nihahenjana" ny rehetra rehefa nilazalaza ny fahatsiarovany azy ireo izy. Rehefa nahita ny mpitsabo aretin-tsaina izy dia tsy nanonona ny fahatsiarovany ny maha Anne azy ary noheverina ho zazavavy kely ara-dalàna.
Mpampianatra amin'ny sekoly ambaratonga voalohany Barbro dia miresaka momba an'i Anne Frank
Fito na valo taona i Barbro, dia nanjary very hevitra izy rehefa nanomboka niresaka momba an'i Anne Frank tany am-pianarana ny mpampianatra azy. Nieritreritra i Barbro hoe: “Ahoana no hahafantaran'ny mpampianatra ahy momba an'i Anne Frank?” Fantatr'i Barbro fa i Anne Frank izy. Nanomboka nahatsapa i Barbro fa olona malaza i Anne Frank. “Ahoana no nahatonga an'izany,” hoy izy nieritreritra? Tamin'ny famaritana ny fikorontanan-tsaina nataony tamin'ny fahazazany dia nitantara i Barbro fa “tsy nety tamiko izany rehetra izany.”
Alao sary an-tsaina hoe tena sarotra ny nahazoan'i Barbro fahatsiarovana tampoka teo amin'ny fiainany taloha ary tsy hisy olona hiresahana intsony, tsy misy olona afaka manampy azy amin'ny fisafotofotoana, ny fahatsiarovam-pahatsiarovana sy ny nofy ratsy.
Ny fiainana taloha an'i Barbro Phobias mifandraika amin'ny zava-niainan'i Anne Frank tamin'ny famonoana olona
Hatramin'ny fahazazàna, i Barbro dia natahotra ny lehilahy amin'ny fanamiana. Na dia olon-dehibe aza, raha nijanona ho fanitsakitsahana ny fifamoivoizana nataon'ny polisy iray, mety hanana tebiteby i Barbro fa handositra izy. Mba hahafahana mandresy ny fanamiany sy ny fiaraha-miasa amin'ny soavaly, dia nanapa-kevitra ny ho tonga polisy Swedish polisy i Barbro tamin'ny fahatanorany. Rehefa vita ny fampiofanana azy amin'ny Polisy Swedish, Nanjary polisin'ny polisy i Barbro ary niara-niasa tamin'ny polisy nandritra ny folo taona izy.
Ankoatr'izay, i Barbro dia tsy nety nihinana tsaramaso hatramin'ny fahazazany, izay nisy ny fianakaviana Frank nandritra ny roa taona lasa izay. Barbro ihany koa no nandro fa tsy nandro. Any amin'ny toby fitanana, ny Nazi dia nitondra ny voafonja tao amin'ny efitrano malalaky nilaza tamin'ny voafonja fa homena ranonorana izy ireo. Raha tokony ho rano dia entona poizina no naripaka tao amin'ilay efitrano hamonoana ireo voafonja. Nentina voalohany tany amin'ny Auschwitz concentration camp, izay nisy ny entona fandrehitra toy izany hamonoana ireo malemy loatra ka tsy hanao asa an-tery. Nafindra tany amin'ny tobin'i Bergen-Belsen izy avy eo, ary maty izy.
Fiovan'ny rivotra any Amsterdam
Barbro koa dia nanohitra tamin'ny fanesorana ny volony. Tao amin'ny toby fitanana, nisy ny fidiram-bola vaovao nesorina ary nitaratra ny lohan'izy ireo ary narahan'ny dingana fanindroany.
Tamin'ny faha-10 taonany, ny fahatsiarovan'i Barbro ny fiainana taloha dia mitarika ny ray aman-dreniny mankany amin'ny trano Anne Frank
Barbro dia nahazo ny fanamarinana voalohany nataony tamin'ny naha Anne Frank azy fony izy folo taona, rehefa afaka nahita ny lalany mankany amin'ny Anne Frank House any Amsterdam tsy misy lalana.
Ny sary ankavanana, izay azo lehibe, dia mampiseho ny boribory manodidina ny araben'i Amsterdam. Mora ny very very mandehandeha eny amin'ny araben'ity tanàna ity, kanefa ny fahatsiarovan'i Barbro ny làlana taloha tany Amsterdam dia mazava. Hotantaraiko izao ny seho, amin'ny fampiasana sombintsombiny avy amin'ny Ary ny Wolves Howled.
Fony izy folo taona, ny ray aman-drenin'i Barbro dia nitondra azy nitety ireo tanàna lehibe tany Eropa, anisan'izany i Amsterdam, ilay tanàna nipetrahan'ny fianakavian'i Frank. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia tsy maintsy niafina tao an-tampon-trano i Otto Frank sy ny fianakaviany, satria nanafika an'i Netherlands ny Nazi ary nanenjika ny Jiosy. Niafina tao an-tampon-trano io ny fianakavian'i Frank nandritra ny roa taona, mandra-pahatongan'ny Nazia, ka nosamborina ary nalefa tany amin'ny toby fitanana.
Ny sisa velona dia ilay raim-pianakaviana, Otto Frank, izay nomena ny diarin'i Anne avy eo, izay navoakany taty aoriana. Taorian'ny ady, ny toerana niafina dia namboarina ho tranombakoka, izay antsoina hoe Ny tranon'ny Anne Frank.
Tamin'izany fotoana izany i Barbro dia folo Diary of Anne Frank dia navoaka sy nizara tany Swedes ary nahafantatra ireo ray aman-dreniny hoe iza i Anne Frank teo amin'ny tantara. Raha tany Amsterdam, ny rainy dia naniry ny hitsidika ny tranon'ny Anne Frank. Tao amin'ny trano fandraisam-bahiny, nalain'izy ireo ny findainy ary nangataka taxi haka azy ireo tany.
Nihiaka tampoka i Barbro: “Tsy mila taxi izahay, tsy lavitra ny mandeha an-tongotra miala eto.” Natoky tanteraka i Barbro fa tsy nety ny fanoherana nataon'ny ray aman-dreniny, fa nanaraka azy tamim-pahalemem-panahy fotsiny izy rehefa lasa.
"Ho avy tsy ho ela isika, eo amin'ny zorony manaraka ihany io," hoy i Barbro tamin'ny ray aman-dreniny. Izy mihitsy dia tsy gaga mihitsy rehefa tonga tao amin'ny Anne Frank House izy ireo rehefa avy nandeha an-tongotra folo minitra namakivaky ny araben'ny tanàna. Ny sarin'ny tranon'ny Anne Frank dia omena ankavanana. Rehefa tonga izy ireo dia nijanona teo ireo ray aman-dreniny tsy nahateny ary nifampijery fotsiny.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: fantatr'i Barbro ny toerana tokony hahitana ny sarin'i Anne Frank
“Hafahafa izany,” hoy i Barbro, rehefa nijoro teo alohan'ny tohatra miakatra amin'ny trano ry zareo. “Tsy dia toy izao taloha.” Gaga be izy ary tsy fantatry ny ray aman-dreniny izay holazaina. Niditra tao an-trano izy ireo ary niakatra tamin'ny tohatra lava tery. Barbro, izay tsy nitebiteby loatra rehefa nanoro azy ireo ny lalana, dia tonga fotsy tampoka tamin'ny tarehy. Notsembohan'ny hatsembohana mangatsiaka izy ary naninjitra ny tanan'ny reniny. Nihoron-koditra ny reniny rehefa tsapany ny tanan'i Barbro, izay mangatsiaka toy ny ranomandry ihany.
Rehefa niditra tao amin'ny toeram-pialokalofana izy ireo, dia nahatsiravina an'i Barbro ny horohoro tampoka izay efa niainany imbetsaka tao anatin'ny nofiny. Hitany fa sarotra ny miaina sy miparitaka amin'ny vatany. Rehefa niditra tao amin'ny efitrano kelikely izy ireo, dia nijanona tampoka izy ary nanjelanjelatra kely.
Nijery ny rindrina teo alohany i Barbro ary nihiaka hoe: “Indreo, eo ihany ny sarin'ireo kintan'ny sarimihetsika!” Ny sarin'ireo kintan'ny sarimihetsika izay notapatapahin'i Anne sy napetany tamin'ny rindrina, izay hitan'i Barbro tamin'io fotoana io, dia nahatonga azy hahatsapa fifaliana, toy ny hoe nody izy.
Sary namboarin'i Anne Frank
Nibanjina ny rindrina banga ny reniny ary tsy azony mihitsy izany. “Sary inona? Marefo ve ny rindrina? ” Nijery indray i Barbro ary hitany fa marina izany. Nihanjahanja ny rindrina! Very hevitra ny reniny ka nahatsapa ho voatosika hanontany ny iray amin'ireo mpitari-dalana raha nisy sary teo amin'ny rindrina indray mandeha.
“Eny,” hoy ny navalin'ilay mpitari-dalana, “nesorina vetivety fotsiny izy ireo mba hapetraka eo ambanin'ny vera mba tsy ho rava na hangalarina.” Tsy nahalala izay holazaina ny renin'i Barbro.
“Ahoana no ahitanao ny lalanao eto voalohany, avy eo manantitrantitra fa samy hafa ny tohatra ety ivelany ary avy eo jereo ny sary eo amin'ny rindrina nefa tsy eo izy ireo.”
Ny renin'i Barbro dia feno fanontaniana, fa i Barbro kosa tsy afaka niteny na dia teny iray monja aza. Te hiala teo fotsiny izy; tsy zakany elaela intsony.
Ny tongony dia nahatsapa toy ny jelly rehefa nidina ny tohatra izy. Mbola tsy nahatsiaro ho tsy nisy mihitsy izy taloha. Ny ranomaso dia nihazakazaka nanoloana ny tarehiny ary ny tongony dia tsy nitondra azy. Rehefa tonga teo amin'ny dingana ambany izy dia nianjera teo ambaniny ny tongony ary nianjera izy.
Ny ray aman-drenin'i Barbro dia manaiky fa nanana fiainana taloha toa an'i Anne Frank izy
Barbro dia nitantara fa ireo trangan-javatra niseho tany Amsterdam ireo dia nino ny ray aman-dreniny fa izy dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Anne Frank. Rehefa dinihina tokoa, ahoana no hahafantarany ny fomba hahatongavana any amin'ny Anne Frank House amin'ny fitsangatsanganana voalohany nataon'ny fianakaviana tany Amsterdam, ary tsy misy lalana? Ahoana no nahafantarany fa novaina ny tohatra? Ahoana no nahafantarany fa ny sarin'ireo kintan'ny sarimihetsika, izay nalain'i Anne Frank avy tao amin'ny magazine, dia tokony ho hita eo amin'ny rindrina manokana ao an-trano, rehefa nesorina ireo sary ireo mba hametrahana azy ireo ao ambadiky ny fitaratra?
Rehefa nandeha ny fotoana dia namaly ny renin'i Barbro tamin'ny alàlan'ny lasa tena ara-panahy sy mpino ny vatana vaovao. Ny rain'i Barbro kosa toa nahasosotra azy. Mitantara i Barbro fa ny rainy dia namaly hoe: “Tsy azoko lavina fa efa teto ianao taloha. Angamba efa niaina taloha ianao ary nanao vatana vaovao indray, fa ianao irery! ”
Fantatr'i Barbro fa tamin'ny fiatrehana ny zava-misy ao amin'ny vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao indray, dia norahonana ny fijerin'izao tontolo izao an'ny Kristiana rainy, izay “nalamina ny zava-drehetra”. Barbro dia faly kokoa, na izany aza, nanomboka tamin'io fotoana io izy afaka niresaka tamin'ny reniny momba ny fiainany taloha toa an'i Anne Frank. Nahazo ny fanohanan'ny reniny izy.
Fiainana Talenta Taloha: Barbro Karlen dia voninkazo ho an'ny ankizy, tahaka an'i Anne Frank
Anne Frank dia fahagagana nanoratra tamin'ny fahazazany. Tsy izy no tena lasibatry ny Famonoana Tambabe satria nanana ny fahafatesany ratsy indrindra. Fa izy kosa no lasa lasibatry ny malaza indrindra satria fony izy mbola tanora dia nanoratra boky, diary, izay novakiana sy noresahina tamin'ny lohahevitra rehetra, toy ny toetran'ny olona sy ny fironan'ny olombelona ho tsara na ho ratsy. Ny ankizy eran'izao tontolo izao dia nomena toromarika hamaky Ny Diarin'i Anne Frank hianarana momba ny fitsarana an-tendrony, izay nahatonga ny diarin'i Anne ho boky faharoa be mpamaky indrindra eran'izao tontolo izao, eo akaikin'ny Baiboly.
Tahaka an'i Anne Frank, Barbro Karlen dia nanoratra ny fahatsiarovan-tena tamin'ny fahazazany. Barbro nitantara fa ny fianarana hanoratra dia fanomezana lehibe. Raha mbola zaza izy, dia tsy afaka niresaka tamin'ny olona momba ny fahatsiarovany niainany taloha izy, fa rehefa nianatra nanoratra izy dia afaka naneho hevitra tamin'ny tablette fanoratana.
Indray andro, raha iraika ambin'ny folo taona izy dia namaky namaky ny sasantsasany tamin'ny sangan'asany ny naman'ny fianakaviana iray ary nahatsikaritra fa izany no porofo mendrika. Nanontany azy i Barbro raha afaka mandefa taratasy fanontam-pirinty any amin'ny mpitory iray izy, izay nekeny.
Navoakan'i Barbro 12 taona
Tamin'ny faha-12 taonany dia navoaka ny bokiny voalohany. Ity boky ity, Lehilahy etỳ an-tany, dia nanjary bokim-pinoana / poetry tsara indrindra tamin'ny tantaran'ny fiteny soedoà. Nanjary olo-malaza zaza i Barbro, niady hevitra momba ny teolojia tamin'ny minisitra sy teolojiana tamin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra. Tao anatin'ny taonany dia nanana boky sivy navoaka izy. Ireo boky nosoratana tamin'ny fahatanorany dia nadika tamin'ny fiteny maro, toa ny Diary of Anne Frank.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha an'i Barbro dia nihemotra, avy eo Reemerge rehefa nifanena tamin'ny mpiambina Nazia Reincarnated izy
Rehefa lasa ny fahatanorany dia nanomboka nihena ny fahatsiarovan'i Barbro ny fiainany taloha, izay nanamaivana an'i Barbro, satria afaka niaina fiainana ara-dalàna ihany izy tamin'ny farany. Rehefa nanohy ny asany tamin'ny Serivisy polisy Suède izy, dia nieritreritra i Barbro fa tsy ho fantatry ny besinimaro mihitsy ny fahatsiarovany azy ho Anne Frank. Araka ny nolazain'i Barbro tamim-pitandremana tao amin'ny resadresaka nataony tamin'ny video, na izany aza, “aza miteny mihitsy.”
Tsy tamin'ny faha-40 taonany no nipoitra indray ny fahatsiarovan'ny fiainana. Nanomboka nifanerasera tamin'ny mpampiasa polisy hafa i Barbro, izay toa nanenjika azy. Ireo fifandraisana ireo no nahatonga ny fahatsiarovana ny fahatsiarovany an'i Anne Frank, ary indrindra indrindra, tsaroany ny sehatra avy amin'ny toby fitanana. Fantatr'i Barbro fa mpiambina Nazi avy any Bergen-Belsen io polisy io.
Na dia teo aza ny fahatsiarovan-dry zareo ny fahatsiarovan-dry zareo taloha, nanome an'i Barbro ny hanoratany ny bokiny, Ary ny Wolves Howled. Barbro nitantara fa te-hampiseho izy fa na dia nandray anjara tamin'ny fanenjehana azy nandritra ny androm-piainan'i Anne Frank aza ireo mpiambina ireo, dia tsy navelany handratra azy indray amin'izao vanim-potoana izao. Tiany ny hizara amin'ny hafa fa mitohy ny fanahy ary toy izany, manome fampiononana ho an'ny hafa.
Barbro Mihaona ny fiainany taloha Cousin, Buddy Elias, Filohan'ny Anne Frank Foundation
Rehefa nanomana ny bokiny izy, Ary ny Wolves Howled, ho an'ny famoahana, Buddy Elias, filohan'ny Anne Frank Foundation ary tamin'izany fotoana izany, ilay havana farany velona an'i Anne Frank, dia nandre momba ny filazan'i Barbro fa ny fanambadiana indray ao amin'ny fianakavian'i Anne Frank. Tamin'ny alàlan'ny mpampanonta azy dia nanasa an'i Barbro hisakafo ao an-tranony i Buddy, na dia nangataka tamin'ny mpampanonta an'i Barbro aza izy mba tsy hanambara hoe iza izy no mifandray amin'i Anne Frank na ny Anne Frank Foundation. Nanoro hevitra ny mpampanonta i Buddy hilaza amin'i Barbro fa ny mpampiantrano azy ireo dia mpankafy ireo boky nosoratany fony izy mbola zaza sy zatovo. Na dia tsy nino ny reincarnation aza izy dia te hihaona tamin'ity olona nilaza ho ny vatana vaovao an'i Anne ity i Buddy. Buddy sy Anne Frank, zanak'olo-mpiray tam-po aminy, dia niara-nilalao tamin'ny fahatanorany.
Barbro dia manoritsoritra ny tarehiny voalohany amin'ny fihaonana amin'ny Buddy, izay nitranga tao amin'ny 1995, tao amin'ny Barbro Karlen: Fampandrosoana an'i Anne Frank horonan-tsary, izay omena ao amin'ny faran'ity pejy web ity.
Mitantara i Barbro fa rehefa nifankahita izy ireo dia nifamihina izy mianadahy ary niara-nitomany. Barbro dia nilaza fa avy hatrany dia nanaiky izy fa i Buddy dia olona fantany sy tiany hatramin'ny fahazazan'ny Frank. Niresaka nandritra ny adiny roa izy ireo tamin'ny fotoana nihaonan'ity fihaonana voalohany ity ary nanohy mpinamana be nandritra ny 20 taona izy ireo, mandra-pahafatin'i Buddy tamin'ny taona 2015. Hijanona ao an-tranon'i Buddy any Suisse i Barbro rehefa nitsidika an'i Eropa izy ary i Buddy nijanona tao an-tranon'i Barbro rehefa nitsidika azy tany Etazonia izy.
Buddy Elias Miteny ao amin'i Barbro Karlen's Ary ny Wolves Howled Book Event
Lahatsoratra iray avy amin'ny gazetiboky alemà, Zeitspiegel, dia navoaka momba ity hetsika ity tamin'ny 19 May 1998:
“Buddy Elias, mpilalao sarimihetsika ao Basel, dia zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Anne Frank ary ny filohan'ny Anne Frank Foundation. Nihaona tamin'i Anne Frank i Buddy Elias tamin'ny fotoana farany talohan'ny nipoahan'ny ady. Nantsoiny hoe "Bernd" ao amin'ny Diary imbetsaka izy.
Ny dadan'i Anne, Otto Frank, dia niverina tany Amsterdam taorian'ny nanafahana azy tany Aushwitz. Nipetraka niaraka tamin'i Buddy Elias zana-drahalahiny izy, tany Basel mandra-pahafatiny.
Roa taona lasa izay dia nihaona voalohany i Buddy Elias sy Barbro Karlen. Tamin'ny fampisehoana ny tantaram-piainan'i Barbro Karlen dia namaky ny ampahany tamin'io ho an'ny mpijery i Buddy Elias.
Bruckenbauer: "Buddy Elias, inona no fahatsiarovanao ny anabavinao, Anne Frank?"
Buddy Elias: "Tena nahafinaritra ilay olona, ​​zazakely mitaiza ny lohany feno heviny ny fomba fiaina. Tena nifankatia izahay, rehefa nifarana ny ady, nifampikasokasoka izahay. "
"Mino ny vatana vaovao ve ianao?"
Buddy Elias: "Eny, izaho."
"Koa ahoana ny aminao rehefa milaza ny vehivavy iray fa teraka indray ny zanak'olo-mpiray tam-po aminao? Tsy i Barbro Karlen irery ihany! "
"Tena nanahy aho, fa i Barbro kosa tsy mitovy amin'ny hafa."
"Nanao ahoana ny fihaonana voalohany tamin'i Barbro?"
"Tena nampihetsi-po tokoa izany. Voalohany dia nahita azy aho, nahare momba azy. Nanana fahatsapana hafahafa hafahafa aho, fahatsapana tsara. Nahatsapa toy ny nanananay fifandraisana amin'ny fanahy izahay. Toa tena azo itokisana tanteraka i Barbro. Azoko sary an-tsaina tsara fa i Anne izy. Ambonin'izany dia tsy afaka miteny aho. Manana ahy akaiky i Anne ao am-pahatsiarovako ny hilaza zavatra hafa. "
"Hitanao ve ny fitoviana misy eo amin'i Anne sy Barbro?"
“Mazava ny volo mainty!”
"Hifankatia amin'i Barbro ve ianao?"
"Mazava ho azy fa nahatonga azy ho mpinamana lalina taminy aho."
Raha hijery ny horonan-tsarin'i Buddy Elias miresaka momba ny fifandraisany amin'i Anne Frank, miangavy, alaivo:
Buddy Elias, Cousin an'i Anne Frank, mamaritra an'i Anne
Barbro dia nifindra nankany Californie, izay ahitana an'i Walter Semkiw, MD dia manamarika fa ny Anne Frank sy i Barbro Karlen dia manana ny endri-javatra mitovy
Barbro sy ny sakaizany iray vavy dia nanao fialan-tsasatra hiaina ny làlambe amoron-tsiraka any California 1. Raha tamin'io dia io, nifototra tamin'ny fiheverana, dia nanapa-kevitra ny hanokatra fivarotana fanafarana soedoà any Carmel i Barbro, na dia tsy mbola nanana traikefa tamin'ny varotra na fivarotana antsinjarany aza izy. . Barbro dia nifindra avy tany Suède ho any avaratr'i Kalifornia, toerana nihaonako taminy. Raha vao naharay antso an-tariby voalohany aho tamin'ny taona 2000, izay nilazana ahy momba ny vehivavy iray izay nilaza fa teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Anne Frank, dia nisalasala aho. Rehefa nihaona taminy aho ary nihaino ny tantarany dia nanjary nino aho fa tena izy izy ary tena nihaona tamin'ny vatana vaovao indray i Anne Frank.
Ao amin'ny bokiny, i Barbro dia tsy manonona fa mitovy amin'ny an'i Anne Frank izy, araka ny fahatsiarovany ny zavatra tena manan-danja aminy, fa tsy ny bika aman'endriny. Rehefa nihaona taminy izy, dia fantatro fa manana endrika mitovy endrika amin'i Barbro i Anne.
Ao amin'ny fampitahana sary nasongadina ato amin'ity tranonkala ity, i Barbro amin'ny tovovavy fito taona dia naseho teo amin'ny ankavia, Anne Frank amin'ny maha-zatovo azy dia eo afovoany ary Barbro raha olon-dehibe no eo ankavanany. Toa jerentsika ny sarin'ny olona iray ao anatin'ny dingana telo eo amin'ny fiainana. Raha ny tena marina, mijery fanahy iray isika amin'ny fiainana andavanandro.
Anne Frank & Barbro Karlen: Reincarnation sy fitoviana amin'ny toetra manokana
Ankoatra ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endrik'i Barbro sy Anne. Anisan'izany ireto:
A. Spiritualité ary fitiavana ny natiora
Lawrence L. Langer, tao amin'ny lahatsoratra nosoratany tao amin'ilay boky, Anne Frank, Reflections on Life and Legacy, dia manoratra momba an'i Anne.
“Mahalana dia tsy latsaka avy amin'ny molotry ny zazavavy telo ambin'ny folo na efatra ambin'ny folo taona ny fahitana ara-panahy. Marina tokoa, araka ny hasehon'ny ankamaroan'ny firaketana vaovao ao anaty diary, i Anne Frank dia olona ara-batana, tia natiora, liana tamin'ny firaisana ara-nofo nataony. ”
Ireo toetra ireo dia hita taratra amin'i Barbro Karlen, izay tamin'ny faha-enina ambin'ny folo taonany dia nampiasa ny vola azony tamin'ny fividianana trano kely any anaty ala. Vetivety dia nofenoiny ny fananany tamin'ny soavaliny, alika roa, saka roa, ondry aman'osy sy akoho amam-borona. I Barbro dia tena tia ny soavaly mitaingin-tsoavaly, izay nitondra azy hanaraka asa amin'ny maha polisy polisy mitaingina azy.
Ny firaisana ara-nofo dia voaporofo tamin'ny fanambadiana tany am-boalohany sy ny fitondrana vohoka tamin'ny faha-18 taonany. Eny tokoa, maro ny fanirian'i Anne no toa nahatanteraka tamin'ny fiandohan'ny fiainan'i Barbro Karlen.
B. Ireo fahaiza-manao litera voajanahary
Anne Frank dia nanana fanomezam-baovao voajanahary ho mpanoratra. Tahaka izany ihany koa i Barbro Karlen dia zaza tsy ampy taona. Ny bokiny voalohany, Lehilahy etỳ an-tany, izay navoaka fony izy taonan'ny 12 taona ary nanjary boky poezia malaza indrindra any Soeda. Mandritra ny taona 12 mankany 17, boky sivy nosoratan'i Barbro, anisan'izany Rehefa tonga ny rivo-doza ary misy fotoana ao amin'ny fanjakana Blossom, dia navoaka.
Mahaliana ny manamarika fa nanantena foana i Anne Frank ho mpanoratra an-gazety. Tamin'ny 11 Mey 1944 dia nanoratra i Anne fa ny "faniriany lehibe" dia ny ho tonga mpanao gazety, "ary avy eo, mpanoratra malaza." Hita indray fa ny fanirian'i Anne dia nahatanteraka tany am-boalohany ny fiainan'i Barbro Karlen.
C. Loha-hevitra amin'ny litera mitovy
Ny lohahevitra mitovy amin'izany dia hita ao amin'ny asa soratr'i Frank sy Karlen. Na dia mety hiady hevitra aza ny olona fa fanahy iniana ireo fitoviana ireo, Barbro Karlen dia nanamafy fa tsy nandinika ny sanganasan'i Anne Frank izy.
Anne Frank, noho ny fanenjehan'ny Nazia ny Jiosy, dia nieritreritra be momba ny tsara sy ny ratsy. Anne koa dia nanana fironana haneho ny toetran'ny olombelona, ​​araka ny hita ao amin'ny fitanisaina etsy ambany momba ny "Lainga." Ny lova navelan'i Anne dia mifototra amin'ny fahafahany mitazona fanantenana manoloana ny tarehin-javatra manjombona. Ny tenin'i Anne Frank nalaza indrindra dia manamafy ny hatsaram-panahy fototry ny olona.
Barbro Karlen koa dia manoratra momba ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny bokiny, Ary ny Wolves Howled, amin'ny ampahany noho ny fahatsiarovany ny fiainan'i Frank ary ny ampahany noho ny fanenjehana niaina tamin'ity fiainana ity nandritra ny fiasan'ny Polisy Swedish. Barbro koa dia manana fironana haneho ny toetra maha-olona, ​​toa an'i Anne. Andeha isika hampitaha ny andininy nosoratan'i Frank sy Karlen momba ny ratsy:
“Ao amin'ny olona fotsiny ny faniriana hamotika, ny faniriana hamono, ny famonoana olona ary ny fahatezerana.”
“Matahotra aho rehefa mieritreritra ireo namana akaiky izay atolotry ny biby goavambe masiaka indrindra eto an-tany. Ary izy rehetra dia satria Jiosy. ”
“Omaly hariva, talohan'ny natoriako, iza no tokony hiseho tampoka eo imasoko fa Mandainga! Nahita azy teo alohako aho, nitafy lamba rovitra… lehibe dia lehibe ny masony ary nibanjina ahy tamim-pahoriana sy latsa aho ka afaka namaky teo imasony hoe: Oh Anne, maninona no nafoinao aho? Ampio aho, ampio aho, afaho amin'ny afobe aho! ”
Barbro Karlen-Ny Ratsy
“Raha mba afaka nanoratra momba ny maha-zava-dehibe azy izy, na dia zava-dehibe aza dia tsy tokony hilavo lefona manoloana ny ratsy, na manao ahoana na manao ahoana maizina sy mahonena toa ny zava-drehetra. Nisy ny ratsy teto ambonin'ny tany ary mety ho teo foana izy. Hiezaka handresy ny tsara hatrany izany. ”
“Na eo aza ny zava-drehetra, dia mbola mino ihany aho fa tena mahay fo ny olona.”
Barbro Karlen-On Tsara
“Fa arakaraka ny isan'ny olona nino ny Tsara sy ny Hery Tsara ao aminy no lehibe kokoa ny fahafahan'ny fihazonana ny ratsy hifehezana. Raha mba nino ny Tsara izy ireo, ary teo amin'ny fisian'ny Hery anaty, olona maro tsy faly no afaka miady amin'ny fivoahan'ny haizina. ”
"Ny ankamaroan'ny olona eto an-tany dia mbola tsy nahalala fa afaka mahita ny Hery Tsara ao aminy izy ireo ary afaka manampy azy ireo izany raha mitady azy fotsiny."
Nihaona tamin'i Barbro Karlen i Annette Lantos & nanasa an'i Barbro & Me tany Washington, DC
Annette Lantos no vadin'ny tara Tom Lantos, izay nanompo tao amin'ny Kongresy Etazonia nandritra ny 27 taona. Tom, izay aseho amin'ny ankavanana ny sariny, no hany sisa velona tamin'ny Holocaust voafidy tao amin'ny kaongresy amerikana. Rehefa nankany Alemana ny filoha George W. Bush mba hanao fahatsiarovana Holocaust dia nentiny niaraka taminy i Tom. Ny mpihira U2 Bono dia mpinamana akaiky, satria nankasitraka ny fanoloran-tenan'i Tom hitondra ny fahamarinana amin'ny vazan-tany maizina indrindra eto an-tany.
Annette sy Tom izay nanolotra ny 14th Dalai Lama ho an'ny loka Nobel, izay azony.
Rehefa nahare momba ny raharaha Barbro i Annette dia naniry ny hihaona amin'i Barbro izy, satria i Annette dia velona ihany koa tamin'ny Famonoana olona. Annette, Barbro ary izaho dia nandany efa ho adiny 3 tao amin'ny biraon'ny Kaongresin'i Tom tany San Mateo, Kalifornia. Tena nifankatia be i Tom sy Annette ary raha tao amin'ny efitrano fihaonambe izahay dia nametaka ny lohany tao an-trano i Tom hanontany ny vadiny malalany raha efa vita ve. Annette, talanjona tamin'ny tantaran'i Barbro, dia nandefa an'i Tom hatrany.
Barbro sy Walter mihaona amin'i Condolezza Rice & Charity Sunshine
Tamin'ny faran'ny fihaonanay dia nahaliana an'i Annette ny sosokevitra fa i Barbro dia ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao an'i Anne Frank ka nangataka anay hanatrika fampisehoana tombony "amin'ny fanasana fotsiny" ao amin'ny Kennedy Center, Washington DC. Amin'ity hetsika ity, ny zafikelin'i Tom sy Annette, Tilleman-Dick, hihira ary Condoleezza Rice miaraka amin'ny fiantrana amin'ny piano. Nandeha izahay, nipetraka teo amin'ny laharan'andriamby ary nifanena tamin'i Dr. Rice taoriana kelin'izay.
Lantos Foundation for Human rights & Justice ary ny Tom Lantos Tunnels
Annette izao no Filohan'ny Departemanta Lantos Foundation for Human Rights and Justice. Ho fanomezam-boninahitra an'i Tom, vao haorina ny tunnels teo amin'ny Highway 1 teo anelanelan'i San Francisco sy Half Moon Bay Tontolon'ny Tom Lantos. Isaky ny mandalo ireo tionelina ireo aho dia miresaka amim-pitiavana an'i Tom, Annette ary ny fiantrana, ary ny zavatra niainantsika tany Washington, DC.
Ny mpanoratra ny fiainana taloha an'ny ankizy Carol Bowman dia manohana ny Anne Frank | Tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao Barbro Karlen
Ny olona manohana ny raharahan'i Barbro dia Carol Bowman, izay mpisava lalana amin'ny fandalinana ireo ankizy izay mahatadidy tampoka ny fiainana taloha. Tamin'ny 2006, Carol sy Barbro dia nanatrika fihaonambe momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray any Colorado Springs. Ho fanampin'ny fianaran'i Carol momba ny raharaha Barbro, dia nanararaotra nandany tolak'andro niaraka tamin'ny mitaingin-tsoavaly i Carol sy i Barbro. Carol dia nanambara fa mitsara ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana hafa any Barbro ho raharaha matanjaka izy.
Carol dia nizara tantara an-tsary mampihomehy momba ny fotoana niarahan'izy ireo. Mba handehanana mitaingina soavaly dia tsy maintsy nandeha taxi avy tany amin'ny hotely nankany amin'ny tranon'omby i Carol sy i Barbro. Notezaina jiosy i Carol ary samy gaga ny vehivavy roa rehefa nivadika ho vehivavy Hasidika volombava mitaingina satroka mainty sy akanjo nentim-paharazana ny mpamiliny. Carol dia nieritreritra hoe: "Inona avy no mety hitranga raha mahazo mpamily fiarakaretsaka izay Hasidika Jiosy any Colorado Springs? ”
Carl Jung antsoina hoe fifandrifian-javatra misy dikany toa an'io “hetsika synchronistic” io. Araka ny voaresaka ao amin'ilay faritra Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano, heverina fa fanahy na fanahy fanahy dia afaka mamolavola tarehin-javatra manan-danja toy izany mba hampitana hafatra amin'ny fomba tsotra.
Anne Frank & Faminaniana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana hafa: mety hanangana antsika indray Andriamanitra
Hitanisa teny nindramina farany avy amin'ny diarin'i Anne Frank aho, izay manondro ny faharetan'ny finoana sy ny vahoaka jiosy. Izy io koa dia manana ny fahamarinana poetika momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, mety tsy namboarin'i Anne, nefa tsara tarehy mitovy.
“Iza no nanao izany tamintsika?
Iza no nanao antsika ho hafa noho ny hafa rehetra?
Iza no namela anay hijaly mafy mandraka ankehitriny?
Andriamanitra no nahary antsika, iza moa isika,
fa Andriamanitra ihany koa no hanangana antsika indray. ”
Fiafaran-javatra teo amin'ny fiainana taloha: An'i Anne Frank sy i Barbro Karlen mitovy endrika amin'ny endriny. Mahaliana fa tsy manonona an'i Anne ao amin'ny bokiny mihitsy i Barbro Ary ny Wolves Howled, na dia nilaza aza ny hafa fa toa an'i Anne Frank izy. Ny fitoviana hita teo amin'i Anne sy Barbro dia nivoaka voalohany tao amin'ny 2006 tao amin'ny bokiko: ateraka indray
Ny fiainana taloha talenta: Barbro Karlen dia prodigy tamin'ny fahazazany, toa an'i Anne Frank.
Phobias avy amin'ny fiainana taloha: Barbro dia nanana tahotra tsy nahy tamin'ny lehilahy nanao fanamiana polisy, izay toa niainga avy amin'ny zavatra niainan'i Anne niaraka tamin'ny miaramila nazia sy mpiambina toby fitanana. Barbro koa dia nanohitra ny ranonorana, tsy te hihinana tsaramaso ary nanohitra ny fanapahana ny volony, izay hita taratra ihany koa ny zava-nitranga tamin'ny fiainan'i Anne Frank, araka ny voalaza etsy ambony.
Fahatsiarovana jeografika: Tamin'ny fitsidihany voalohany tany Amsterdam tamin'ny faha-folo taonany dia afaka nitarika ny ray aman-dreniny tany amin'ny trano fandraisam-bahiny tao amin'ny tranon'i Anne Frank House, tsy misy torolalana, i Barbro.
Fiovan'ny fivavahana, ny zom-pirenena ary ny fifandraisana ara-poko: Teraka tany Alemaina i Anne Frank, izay nanenjehana azy fony Jiosy nandritra ny Holocaust. Teraka tamin'ny fianakaviana Kristiana tany Soeda i Barbro.
Raha fantatry ny Nazia nandritra ny Ady Lehibe Faharoa fa afaka teraka jiosy ny olona iray nandritra ny androm-piainana iray ary ny kristiana tamin'ny iray hafa, dia tsy ho nisy mihitsy ny Famonoana Tambabe. Toy izany koa, rehefa mahatsapa ny Palestiniana Miozolomana fa afaka teraka indray toy ny jiosy israeliana, rehefa fantatr'i Sunni fa afaka miverina vatana vaovao amin'ny maha Shiita azy izy ireo, dia takatry ny Kristiana fa afaka teraka indray izy ireo ho lasa kolotsaina Silamo ary ny mifamadika amin'izay no hamafisina ny fifanolanana mifototra amin'ireo fahasamihafana ara-kolontsaina misy eo amin'ny maha-izy azy. .
Ny tranga Barbro Karlen dia mampiseho amin'ny fomba maodely fa ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia afaka manova an'izao tontolo izao amin'ny fomba tsara.
Anne Frank | Barbro Karlen Horonan-tsary feno halava-35 minitra
Porofo mikasika ny fahaterahana indray ny horonan-tsary-9